Pigment Oxygène vy, Yellow Oxygène Iron, Oxygène Iron Granular - Pigment Shencai
Ny orinasan-tsolika Shijiazhuang Shencai dia manokana amin'ny famokarana vy oksida mena, mavo oksida vy, vy oksida mainty, maitso oksida vy, volomboasary oksida vy, volontsôkôlà vy, chromium oxide green. Green arts tsara, orinasa vy phthalein maintso, vokatra 40000 taonina isan-taona…
Miaraka amin'ny tsipika famokarana telo, 50.000 taonina ny famokarana isan-taona.
Ekipa Teknika R&D manokana ary Laboratoara matihanina, mampiasa fitaovana fanandramana mandroso ..
Izahay no vidiny tsara indrindra sy serivisy kalitao tsara indrindra miverina amin'ny mpanjifa taloha sy vaovao.
dingana famokarana vy oksida ye ...
Ny mavo oksidana vy dia loko mavomavo vovoka mangarahara. Ny hakitroka somary 3.5. Milamina ny fananana simika. Ny haben'ny sombintsombiny dia 0.01-0.02 μ M. Manana faritra amboniny manokana (manodidina ny 10 heny amin'ny oksida vy mahazatra), ny fitrohana ultraviolet mahery, ny fanoherana ny maivana, ny atmosfera ...
Misy dingana roa famokarana lehibe amin'ny vy oksida mena: maina sy lena. Androany isika dia hijery ireo fizotrany roa ireo. 1. Amin'ny fizotra maina Ny fizotran'ny maina dia fomba famokarana mena amina oksida vy nentim-paharazana any Shina. Ny tombony azony dia ny fizotry ny famokarana tsotra, ny dingana fohy ...
Ny famokarana pigment oksida vy vaovao ...
Shijiazhuang Shencai Pigment Factory natsangana tamin'ny taona 2003. Manana foibe famokarana solika vy (Hebei Chengyu Pigment Co., Ltd) izahay, hita ao amin'ny valan-javaboarin'i Chemical Chemical Ningjin sira, faritany Hebei, faritany indostrialy simika simika, any amin'ny ofisialy dia ao famokarana. Miaraka amin'ny pro telo ...